लेख > परमेश्वरसँगको अनुभव > येशू: सफा गर्ने
बाहिरी सफाईले हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्दैन! व्यक्ति व्यभिचारको बारेमा दुई पटक सोच्न सक्छ, तर पछि नुहाउने विचारमा चकित हुनेछ। चोरी भनेको एक सानो मामिला हो, तर जब कुकुरले उसलाई चाट्छ भने तिनीहरू निराश हुन्छन्। तिनीहरूसँग कसरी तपाईंको नाकमा वार गर्ने, कसरी सफा गर्ने, कुन जनावरहरू बेवास्ता गर्ने, र उनीहरूको स्वीकृति पुनर्स्थापित गर्ने विधिहरू बारे नियमहरू छन्। संस्कृतिले सिकाउँछ कि केहि चीज भावनात्मक अपमानजनक हुन्छन् - घृणित - र यी व्यक्तिहरुलाई अहानिकारक छ भन्नु यो सजिलो छैन।
येशूको शुद्धता संक्रामक छ
बाइबलको रीतिथिति शुद्धताको बारेमा धेरै कुरा छ। बाह्य रीतिथितिहरूले मानिसहरूलाई बाह्यरूपमा शुद्ध पार्न सक्छ, किनकि हामी हिब्रू 9,13: १ in मा पढ्छौं, तर केवल येशूले मात्र हामीलाई आन्तरिक शुद्ध पार्न सक्नुहुन्छ। दृश्य प्रतिनिधित्व को लागी एक कालो कोठा कल्पना गर्नुहोस्। त्यहाँ एक प्रकाश राख्नुहोस् र पूरै कोठा उज्यालोले भरिन्छ - «ठीक» यसको अन्धकारबाट। त्यस्तै गरी, येशू हाम्रो शरीरमा भित्रिबाट शुद्ध पार्नको रूपमा मानव शरीरमा आउनुहुन्छ। अनुष्ठान अशुद्धता सामान्यतया संक्रामक मानिन्छ - यदि तपाईं कसैलाई अशुद्ध छान्नुभयो भने, तपाईं पनि अशुद्ध बन्नुहुन्छ। तर येशूको लागि यो विपरीत दिशामा काम गर्‍यो: उहाँको शुद्धता संक्रामक थियो, जसरी ज्योतिले अन्धकारलाई पछाडि धकेल्छ। येशूले कुष्ठरोगीलाई छुनु भयो र स .्क्रमित हुनुको सट्टा उहाँ तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र सफा गर्नुभयो। ऊ हामीसँग पनि त्यस्तै गर्छ - उसले हाम्रो जीवनबाट धार्मिक र नैतिक फोहोर हटाउँछ। जब येशू हामीलाई छुनुहुन्छ, हामी सदाको लागि नैतिक र धार्मिक रीतिले शुद्ध हुन्छौं। बप्तिस्मा एक विधी हो जुन यस तथ्यलाई प्रतीक गर्दछ - यो एक रीत हो जुन जीवनकालमा एक पटक हुन्छ।
अनुष्ठान विशुद्धतामा केन्द्रित संस्कृतिमा, मानिसहरू आ-आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न असमर्थ हुन्छन्। के यो पनि एक संस्कृतिमा लागू हुँदैन जुन भौतिकवाद र स्वार्थी प्रयासहरूको माध्यमबाट जीवनलाई सार्थक बनाउनमा केन्द्रित छ? केवल अनुग्रहले मात्र मानिसहरू सबै संस्कृतिमा मुक्ति पाउन सक्दछन् - परमेश्वरको अनुग्रहले आफ्नो पुत्रलाई सर्वशक्तिमान डिटर्जन्टको साथ प्रदूषणको विरूद्ध लड्न पठाउँदै र उहाँको प्रेमको शक्तिद्वारा हामीलाई साँचो पूर्ति दिन। हामी मानिसहरूलाई रिडीमरमा लैजान सक्छौं जसले तिनीहरूलाई सफा गर्छ र तिनीहरूलाई प्रेम गर्दछ। उसले मृत्युलाई आफैंले जितेको छ, यत्तिको माध्यम यसले सबैभन्दा ठूलो विनाश गर्दछ। र उहाँ उठ्नुभयो र अनन्त अर्थ र शान्तिको साथ मानव जीवनको मुकुट लगाउनुभयो।
फोहोर लाग्ने मानिसहरूलाई येशू सफा पार्नुहुन्छ।
उसले लाज मान्ने मानिसहरूलाई सम्मान प्रदान गर्दछ।
उसले ती व्यक्तिहरुलाई माफी प्रदान गर्दछ जसले feelण तिर्नु पर्ने महसुस गर्छ। जो मानिस एक्लो महसुस गर्दछ, उसले मेलमिलाप प्रस्ताव गर्दछ।
ऊ दासत्वमा परेका मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ।
जसले आफू आफू नभएको महसुस गर्दछ, उसले आफ्नो स्थायी परिवारमा धर्मपुत्र बनाउँछ।
जो थकित महसुस गर्छन्, यसले आराम प्रदान गर्दछ।
चिन्तितहरूका लागि, उहाँ शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ।
अनुष्ठानहरू मात्र निरन्तर दोहोर्याउने आवश्यकता प्रदान गर्दछ। भौतिकवाद मात्र अधिक को लागि तीव्र इच्छा प्रदान गर्दछ। के तपाईं कसैलाई चिन्नुहुन्छ जसलाई ख्रीष्टलाई खाँचो छ? के तपाइँ यसको बारेमा केहि गर्न सक्नुहुन्छ? यो सोच्न को लागी कुरा हो।